Ogaysiis Bulshada reer Maakhir | allsanaag
Ogaysiis Bulshada reer Maakhir
Dadqalatooyinkii shalay Soo weeraray gobolka Bari, oo gaadmada ku dilay Asakartii suuxaranaysay ee reer Puntland , oo halkaa u joogay in nabad loogu seexdo Boosaaso iyo Badhan. waxay ka soo wada jeedeen dhamaan beelaha walaalaha ah ee reer Puntland.
Iyada oo sidaas tahay, ayaa hadana dhimashada iyo dhaawaca loo kala badnaa. Beesha Warsangeli ayeey ka soo jeedeen Askartii , Dumar iyo caruurtii ugu badnaa oo halkaa lagu dilay . Sidoo kale dhaawaca manta yaala Cisbitaalada isla beeshaas ayeey ugu badan yihiin. Intooda badana waxa la tacaalaya qaraabaddii iyo maamulka Puntland oo la ogyahay inaanu dhaqaale badan lahayn .
Hadaba Asakarta naftooda u hurtay difaaca dadkooda iyo degaankooda oo la dagaalamayey nin ka yimid Koonfurta Soomaaliya oo xiisaynaya inuu dhiig daadiyo isaga oo qoslaya, uma uuna dhiman, naftiisana uma hurin inuu magac helo ee wuxuu ilaalinayey oo difaacayey dhulkii uu awoowayaashii uu ka dhaxlay oo Pakistan la doonayo in maanta loo gacan geliyo.
Askarta maanta ku soo dhaawacantay dagaalkaas oo sariiraha Cisbitaalada Pumtland saaran oo u baahan daryeelka waxay sugayaan maaha qoysaskoodii ee waa gurmad deg deg ah oo loo fidiyo oo lagu badbaadiyo naftooda .
Ugu danbayntii Qurba joogta reer Maakhir oo aanu ognahay dad iyo dal jecaylkoodu, waxaan ugu baaqaynaa in sida ugu dhakhsiyaha badan loogu gurmado Askarta reer Puntland ee dhaawaca ah ee yaala sariiraha cisbitaalada Puntland
← Turkey strongly condemn the terrorist attack on Af Urur military base in Puntland that has killed and injured many soldiers. Puntland iyo Dagaalka Cusub →